နီပေါတွင် နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုပြင်းထန်လာ။ မရေမရာဖြစ်လာသော အနာဂါတ် နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသော နိုင်ငံအပေါ် သြဇာညောင်းလိုသည့် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့က ကာလရှည် စောင့်ကြည့်နေခဲ့ – H2Oupdatenews
နီပေါတွင် နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုပြင်းထန်လာ။ မရေမရာဖြစ်လာသော အနာဂါတ် နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသော နိုင်ငံအပေါ် သြဇာညောင်းလိုသည့် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့က ကာလရှည် စောင့်ကြည့်နေခဲ့
oungmarine11@outlook.com 22/12/2020	No Comments
အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအချင်းချင်း အပြန်အလှန် ခွက်စောင်းခုတ် အပြစ်တင်လျှက်ရှိစဉ် တနင်္ဂနွေနေ့၌ နီပေါထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များက ပါလီမန်အား ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသောနိုင်ငံအပေါ် သြဇာညောင်းရန်အတွက် တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့က ကာလကြာရှည်စွာစောင့်ကြည့်နေခဲ့သည့် ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းဒေသနိုင်ငံငယ်လေး၏ အနာဂါတ်နိုင်ငံအခြေအနေမှာ မရေမရာဖြစ်လျှက်ရှိသည်ဟု The New York Times က ယမန်နေ့ ရေးသားသည်။ ..
ဝန်ကြီးချုပ် ကေပီရှာမာအိုလီက ၎င်း၏ နီပေါကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် အတိုက်အခံအုပ်စုများက ကန့်ကွက်လျှက်ရှိသော်လည်း အကြီးဆုံးနီပေါကွန်ဂရက်အပါအဝင် အောက်လွှတ်တော်အား ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပရန် မျှော်လင့်ထားသည့် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ပုံမှန်ထက် တစ်နှစ်ကျော်စောကာ လာမည့် ဧပြီလနှောင်းပိုင်းမှစတင်၍ ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန် စီစဉ်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ..
အိုလီသည် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကိုနှိမ်နင်းရန်၊ တရုတ်နှင့် ပိုမိုခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေးများ တည်ဆောက်၍ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကတိကဝတ်များဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။ သို့သော် ရာထူးနေရာခန့်အပ်မှု မျက်နှာသာလိုက်သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် သူ၏ပါတီအတွင်း မကြေနပ်နပ်မှုများတိုးပွားနေစဉ် ယခုကဲ့သို့ ပါလီမန် ၂-ရပ်လုံးအား ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။..
အိုလီ၏ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ကိုယ်တိုင်အကျင့်ပျက်ခြစားလျှက်ရှိကြောင်း စွပ်စွဲချက်များထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသားများထံမှ ငွေလွှဲပို့ခြင်းအပေါ်မှီခိုခဲ့သော နိုင်ငံ့စီးပွားရေးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကျရောက်ခြင်းကြောင့် ပြိုလဲခဲ့ရသည်။ ကူးစက်ကပ်ရောဂါအပေါ် အိုလီအစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသည့် အချို့သော ဆေးဝါးပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းမှာ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက် များစွာမြင့်မားနေကြောင်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ပျံ့ပွားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် တရုတ်ထံမှ ဆေးပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးသည် အဂတိလိုက်စားမှုတွင် ပါဝင်နေကြောင်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများက ရေးသားကြပြီး နိုင်ငံ့အတွင်း ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများဖြင့် မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာသည်။ ..
အိမ်နီးချင်း တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား တင်းမာမှုများမြင့်တက်နေချိန်တွင် နီပေါနိုင်ငံ၌လည်း နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်လျှက်ရှိနေသည်။ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းနယ်နိမိတ်တလျှောက်ရှိ အငြင်းပွားနယ်မြေများနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံက တောင်းဆိုမှုများ ပိုမို၍ ပြင်းထန်လာခြင်းကြောင့် စစ်အင်အားကြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား တင်းမာမှု ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ..
အဆိုပါ တင်းမာမှုများသည် လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လတွင် နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်များအကြား လက်နက်မဲ့အကြမ်းဖက်မှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး အိန္ဒိယစစ်သား ၂၀ နှင့် တရုတ်ဘက်တွင် အရေအတွက် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသော ပျက်စီးသေဆုံးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးက တင်းမာမှုများကို လျှော့ချရန်ကတိပြုခဲ့ကြသော်လည်း ဂျိုးဘိုင်ဒန်သမ္မတဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် အမေရိကန်နှင့် အိန္ဒိယတို့အကြား ပိုမိုခိုင်မာသည့် ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ရန် အခွင့်အလမ်းရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အမေရိကန်၏ အကူအညီဖြင့် ဒေသတွင်း၌ တရုတ်၏ ခြေလှမ်းများမှာလည်း ယိမ်းယိုင်လာဖွယ် ရှိနေသည်။ ..
နီပေါသည် အိမ်နီးချင်းနှစ်နိုင်ငံအကြား မည်သည့်ဘက်သို့ မျက်နှာသာပေးရ ကောင်းနိုးနိုးဖြင့် အချိန်ကုန်ခဲ့ရသည်။ နီပေါနိုင်ငံသားအများအပြားတို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး ဟိန္ဒူလူဦး ရေအများစုနေထိုင်ရာ အိန္ဒိယနှင့်ကျယ်ပြန့်သော စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများရှိခဲ့သည်။ သို့သော် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အဆိုပါ ဆက်ဆံရေးများ ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့သည်။..
၂၀၁၅-ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယက ( ၎င်းနိုင်ငံအရှေ့ဖျားဒေသ ) ( နီပေါများစွာ ပါဝင်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည့် ) မော်ဝါဒီသောင်းကျန်းမှုများကို သွေးထွက်သံယိုများစွာ ချေမှုန်းခဲ့ပြီးနောက် နီပေါနိုင်ငံအပေါ် တရားဝင်မဟုတ်သော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို လပေါင်း အတော်ကြာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ အိန္ဒိယ၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ နီပေါနိုင်ငံက ပိုမိုပါဝင်သင့်ကြောင်း နယူးဒေလီအစိုးရ၏ ခံစားမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။..
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် နီပေါနေလူအချို့က ၎င်းတို့နိုင်ငံဘက် နယ်စပ်ဒေသတွင် ရေလွှမ်းမိုးမှု ဆိုးရွားလာရခြင်းအတွက် တာတမံများတည်ဆောက်ခဲ့သည့် အိန္ဒိယကို အပြစ်တင်ခဲ့ကြသည်။
နယူးဒေလီနှင့် တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ တရုတ်၏ ခြေလှမ်းမှာလည်း နီပေါနိုင်ငံအတွင်း ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်။ ဒေသတွင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို တည်ဆောက်ရေး ကြိုးပမ်းရာတွင် အရေးကြီးသည်ဟု ယူဆရသော နီပေါနိုင်ငံသို့ တရုတ်က ငွေကြေးအမြောက်အများ စီးဝင်စေခဲ့သည်။ ..
အဆိုပါ စည်းရုံးရေးစတင်သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နီပေါ၌ ကေပီရှာမာအိုလီ၏ ကွန်မြူနစ်ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ ၌ အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ..
လက်ရှိ မငြိမ်မသက်မှုမှာ အဆိုပါအကျိုးအမြတ်ကို သံသယဖြစ်စေသည်။ အိုလီ၏ ကွန်ဂရက်နှင့် အောက်လွှတ်တော်အား ဖျက်သိမ်းမှုသည် အယုံအကြည်မရှိကြောင်း အဆိုတင်သွင်းလာနိုင်ခြေများကို တားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များအား ဘေးဖယ်ထားလိုက်နိုင်သည်။ ..
သို့သော် နီပေါတွင် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူက ကွန်ဂရက်နှင့် အောက်လွှတ်တော်အား ဖျက်သိမ်းရန် ဖွဲ့စည်းပုံ၌ အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားခြင်း မရှိသဖြင့် နိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံး တရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် အဆုံးအဖြတ်ခံယူရဖွယ်ရှိနေသည်။
((( The New York Times., Dec 21, 2020, “ Nepal falls into political turmoil. China and India are watching. By: Bhadra Sharma” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာ သာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: အိန္ဒိယနယ်စပ်၌ လတ်တလော ပစ်သတ်ခံရသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရပ်သားဦးရေမှာ ၁၀-နှစ်အတွင်း အများဆုံးဖြစ်လာ။ ၂၀၀၀ မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကြား အိန္ဒိယနယ်ခြားလုံခြုံရေးတပ်များက သေနတ်ဖြင့်ပစ်/သေသည်အထိညှင်းပန်းခြင်းကြောင့် အနည်းဆုံး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၁,၁၈၅ ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ဒဏ်ရာရ သို့မဟုတ် ပြန်ပေးဆွဲခံရသူများဦးရေ ပါဝင်ခြင်းမရှိသေးဟု ဆို။
Next Next post: Covid-19 ကို ရာသီတုပ်ကွေးနှင့် မနှိုင်းယှဉ်အပ်ပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို “ ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားသော ကပ်ရောဂါ “ အဖြစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ကြေညာထားဆဲဖြစ်သည်။